English to Shona Meaning/Translation of Evil
English to Shona Meaning :: evil
Evil - zvakaipa Evil :: zvakaipa Eviler :: eviler Evilest :: evilest Evilly :: evilly Evilness :: evilness Evils :: zvakaipa
Adjective(1) Having the nature of vice(2) Having or exerting a malignant influence(3) Tending to cause great harm(4) Sinful(5) Immoral
Noun(1) That which causes harm or destruction or misfortune(2) The quality of being morally wrong in principle or practice(3) Badness(4) Immorality; disaster
zvakanaka uye zvakaipa
Stags aren't EVIL.
...were originally EVIL terminators created by Skynet...
English to Shona Dictionary: evil
Meaning and definitions of evil, translation in Shona language for evil with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of evil in Shona and in English language.
What evil means in Shona, evil meaning in Shona, evil definition, examples and pronunciation of evil in Shona language.
Hobble (hobble) :: Her foot swelled during the night making it hard for her to walk so it was more of a hobble Physiotherapy (physiotherapy) :: We thank the physicians physiotherapists and nurses at the occupational health care centres in Tampere for their contribution Cut (cheka) :: subcultures which cut across national and political boundaries Well (tsime) :: Here was a woman who had done her best to raise her family well in difficult circumstances Wellness (Wellness) :: when you come right down to it stress affects every aspect of wellness
Born (zvarwa) :: Dame Elizabeth was born to American parents and left London for Los Angeles when she was seven Borrow (kwereta) :: designers consistently borrow from the styles of preceding generations Boss (bhasi) :: While a fragmented helmet had been unusually wrought from one piece of iron the shield boss and sword pommel can only be paralleled by Swedish finds Both (zvose zviri zviviri) :: Dickens and Joyce both were excellent writers Bother (dzingaidza) :: In fact by the next election this should all be so automated that I wont even have to bother to show up
Overt (dzakajeka) :: Once there is more than one overt act there is a range of possibilities for sentencing Palatable (zvinakidze) :: Wall Street analysts find the companys proposal more palatable than the states Palisade (rusvingo) :: Most books mark the routes end where Santa Monica Boulevard intersects Ocean Avenue on the palisades above Santa Monica State Beach